Monday October 18, 2021 - 05:14:11
Wararka ka imaanaya wadanka itoobiya ayaa sheegaya in dagaallo lafa jebis ah ay ka socdaan inta badan jabhadaha dagaalka ee ismaamullada cafarta iyo amxaarada.
maleeshiyaadka kooxda TPLF ayaa ku dhawaaqay in ay iska difaaceen weeraro dhowr ah oo uga yimid dhanka ciidamada melleteriga, Afhayeenka TPLF ayaa sheegaya in ay burburiyeen illaa 25 gaari oo nuuca gaashaaman ah ayna iska caabiyeen ciidamadii abiy.
wuxuu caddeeyay in ciidamadoodu ay kaabiga ku hayaan magaalada disis ee caasimadad gobolka wallo ahaydna halki ay isbuucii lasoo dhaafay weerarada cirka iyo dhulka ah kasoo qaadeen ciidamada Abiy Axmed.
dhanka kale dagaallo culus ayaa lagasoo sheegayaa gobolka Cafarta,ilo wareedyo lagu kalsoonyahay waxay sheegayaan in ciidamada melleteriga Federaaliga ah ay isaga baxeen mandiqadda Haara ee gobolka amhara arrinkaas oo xoogaga TPLF usahlay in ay adkeystaan magaalooyinkii ay uga sugnaayeen cafarta.
ciidamada ismaamulka cafara ayaa kaligood dagaal adag kula jira TPLF oo doonaysa in ay qabsato magaalada istiraatiijiga ahSifra, magaalada Uwwa oo maalmihii lasoo dhaafay lagu loollamayay ayay xaaladeedu degantahay waxaana ku sugan maleeshiyaadka cafarta.
Jeneraal Tadesse Werede oo ah taliyaha guud ee fallaagada Tigreega ayaa xaqiijiyay qabsashada magaalada Sifra, wariyaal ku sugan ismaamulka Cafarta ayaa iyana adkeeyay sheegashada fallaagada ee qabsashada magaalada Sifra.
"Ciidanka gummeysiga TPLF ayaa ixtilaalay magaalada Sifra balse hareeraheeda waxaa ka socda dagaal culus" waxaa sidaas yiri wariye cafari ah.
Waa magaaladii ugu muhiimsaneed ee Maleeshiyaadka Tigreega ay ka qabsadaan ismaamulka Cafarta oo bah wadaag siyaasadeed la ah R/wasaare Abiy Axmed.